Welcome to Aayaha Nolosha » BAJAAJLE LAGU DILAY DEGMADA HODON EE MAGAALADA MUQDISHO.
BAJAAJLE LAGU DILAY DEGMADA HODON EE MAGAALADA MUQDISHO.
June 9, 2018 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugnaa beerta qaadka Degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho ayaa dilay wiil dhalinyaro ah oo ahaa darwal mooto Bajaaj.
Wiilka la dilay iyo askariga ayaa la sheegay in aanu dhex marin wax muran ama wada hadal sababi kara in naftiisa qaaliga ah la dhaafsiiyo, waxayna dad goob joogaayaal ahi ay inoo sheegeen dilka inuu dhacay xili wiilka Mooto bajaajlaha uu baakin ku jiray.
Askariga falkaasi wuxuushnimada ah ku kacay ayaa isaga baxsaday goobta iyadoo halka uu dilka ka dhacayna ay gaareen ciidamo ka tirsan dowladda, halka saacad kadib goobta laga qaaday meydka wiilka dhalinyarada wadaha ka ahaa Mooto Bajaajka.
Maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale askari ka tirsan dowladda wiil mooto bajaajle ahaa ku dilay magaalada Muqdisho, mana jirto ilaa iyo hadda cid wax ka qabatay dhibaatooyinka ka dhanka ah wadayaasha mooto bajaajka oo ay u geysanayaan ciidamada dowladda ee laga sugayay inay sugaan amaanka dadka shacabka ah.